Wararkii Soomaalida ee Radiolaascaanood .
Qiimaha isgaadhsiinta oo si xoogleh hoos ugu dhacay magaalada Laascaanood.
Laascaanood,05 sep.(Radiolascaanood)- Tartan ba`an oo dhexmaraya shirkaddaha isgaadhsiinta ayaa ka socda Magaalo madaxda gobolka Sool ee Laascaanood, kaasi oo gayasiiyey in qiimaha isgaadhsiintu uu si xawli leh hoos ugu dhoco,
iyadoo ay hada daqiiqdii telefoon ay marayso ilaa 0.55 oo doolarka mareykanka ah taasi oo u dhiganta 10,000 oo shilin Soomaali ah halii ay awal ka ahayd 1.40 doolar.
Dadweynaha magaalada Laascaanood degan ayaa waxay aad u soo dhoweeyeen talaabadani ay isku eryeyaan shirkaduhu iyadoo laga simay dhamaan guryaha iyo meheradaha yaryar ugu yaraan laba madax telefoon maadaama aanay iyagu ahayn kuwo isla hadli kara.
Shirkada isgaadhsiinta ee lagu magcaabo Hawd iyo Nugaal ayay ahayd iyadu ta bilawday qarda jeexa intaa leeg kadib markii ay shirkadaha kale ee ka soo horeeyey ay isku fahmi waayeen wadahadalo dhawra oo ay ugu soo bandhigeen in la xadido qiimaha isgaadhsiinta.
Shirkadahani ayaa waxay isku hawlayaan sidii ay ukala horosan lahaayeen laymanka guryaha oo ah kuwa ugu badan ee ay ka soo xerooto lacagta ay ku xisaabtamaan, iyadoo ayba ka dhigeen gelinta guryaha mid bilaa lacag ah.
Shirkada Telasom ayaa iyadu ku hawlan inay qaab kale u jihayso ganacsigeeda iyagoo wada olole lagu gaadhsiinayo tuulooyinka iyo degmooyinka gobolka layman telefoon sida Xudun, Yogoori, Adhicadeeye, Boocane, kalabaydh iyo qaarkale oo intooda badan sahankii ay sameeyeen ay ku guulaysteen.
Ceelka Awrboogays oo dib loo kicinayo .
Awrboogays,Sanaag,Soomaliya,05 sep.(Radiolascaanood)- ) Hayda Deeqde Dadweynaha Norwey NPA ayaa gaadhsiisey magaalada Awrboogays oo kala badha magaalooyinka Laascaanood iyo Ceerigaabo qalab dayactir oo loogu tala galay ceelka magaaladaasi oo ah halaka ugu badan ee xoolaha nooli ka cabaan.
Qalabkani ayaa la sheegay inuu yahay matoor weyn oo qaadi kara awood badan, dayactir deynabooyinka ceelasha iyo shaqaalaha wakaalada biyaha, iyadoo in mudo ah uu fadhiyey ceelkaasi, waqtigana ay ka jiraan abaaro daran degaanda ku xeeran Awrboogays.
Ceelkani ayaa qiyaas la sameeyey waxaa maalintii ka cabi jirey 10,000 oo geel ah, 5,000 oo lo ah, 15,000 oo adhi ah iyo celcelis ahaan 2,000 oo isugu jira fardo iyo dameero, iyadoo mararka qaarkoodna ay ku laban laabmaan sida ay sheegeen duqeyda degaan kaasi.
In kasta oo ceelkani ay jiraan lacago laga qaado xoolaha ka cabaya hadana waxaa jira maamul xumo haysata dadka degaanka oo aan ka faa`iidaynin waxa ka soo baxa ceelka sugana inta uu ka fadhiisanayo iyagoo waqtigaasi baadi doona cid wax kala qabata sida uu noo sheegay ing. Siciid Aw Cabdi oo dhawr jeer wax qabad ka sameeyey ceelkaasi.
Sida uu noo sheegay Masuulka ugu sareeya xafiiska hay`adda ee Laascaanood Cismaan Saleebaan Yuusuf oo aanu khadka telefoonka kula xidhiidhnay isaga oo jooga magaalada Nayroobi waxa iyana la geeyey matooro dhawr magaalo oo ka mida degaankani si looga haqab tiro baahida biyaha ayna ka mid yihiin Xudun, Taleex,Adhi-cadeeye iyo Waxara-cayaarshe.
Sida uu Cismaan sheegay Hay`addu waxa ay qorshaynaysaa sidii ay degaanka oo dhan uga haqab tiri lahaayeen adeega boiyaha oo ah waxa ugu muhiimsan ee ay hay`addani gacan siiso sanadihii aynu soo dhaafnay.
Hay`addani waxa ay hawlgalo biyo xidheena ah ka fulisey dhulka oomanaha ah ee Hawdka iyadoo magaalooyinka yaryar ee dhulkaasi qaarkoodna ka dhistay berkedo biyaha loogu kaydiyo dadka hadii ay dheeraadaan waqti abaareedku.
Awrboogays, Sanaag. RadioLaascaanood
Shirkii Fiqi-fuliye oo la soo gabagabeeyey .
Fiqi-fuliye,Sanaag,Soomaaliya,05 sep.(Radiolascaanood)-Xaflad balaadhan oo lagu soo gabagabeeyey shirbeeleedkii ka socdey degmadda Fiqifuliye ayaa lagu qabtay madasha shirka oo dhinac waqooyi kaga beegan magaalada halkaasi oo lagu soo bandhigay horumarkii shirku gaadhey.
Maraan khadka Telefoonka Guurguura kula xidhiidhnay Cumar Jaamac Abtiile oo ka mid ahaa shirgudoonka ayaa waxa uu ii sheegay in laga wada hadlay arimo dhawra oo markaasi loo arkaayey inay yihiin kuwa ugu xasaasisan.
Falaanaqayno dheer iyo dodo aan loo kala hadhgelein habeen iyo maalina la waday ayaa la isla afgartay in 1.janaayo 2004 la isugu yimaado shir weyne lagu qaban doono degmada Xudun ee gobolka Sool.
Waxaa la magcaabay gudi ka kooban 14 xubnood oo ay dusha kala soconayaan cuqaasha kuwaasi oo wadi doona hawlaha beesha iyadoo taasi looga dan leeyahay isku xidhka iyo xidhiidhinta guud ahaan beesha.
Waxaa la go`aansaday in wax laga qabto arimaha bulshadda oo la sheegay inay yihiin kuwa ugu muhiimsan ee waqtigani hor oo laya gudigaasi la magcaabay, waxaa kale oo iyana la go`aamiyey in arimaha degaanka loo saaro gudiyo kala xaajooda dadka ay kala dhaxayso.
Shirkani oo la filaayey inuu socdo mudo dheer ayaa waxa lagu dadaaley in waqti gaaban lagu soo gabagabeeyo taasi oo ay ugu wacan tahay deegaanta oo ah mid aad u adag maadaama waqtiga lagu jiro uu yahay xagaa adag.
Dad badan baa qabay in shirkani lagu dhamays tiro arimaha shirka danbe loogu balamay, taasise waxa ku awood batay dadkii iyagu doonayey in arimahani shirkan horyaala la sii guda galo si loo soo hordhigo waxqabadkeeda shirka danbe.
Waxaa meesha ka baxday arin ay dadku si aad ah isha ugu hayeen in lagu daro oo ahayd inay beeshani samaysato Isin, taasise waxay noqotay midaan madasha la keenin.